Shirkii Madaxtooyadda, Badheedhihii Garnaqsigii Isbahaysiga Murashixiinta, Jawaabtii Madaxweynaha Iyo Heshiiskii | Ogaalnews
Shirkii Madaxtooyadda, Badheedhihii Garnaqsigii Isbahaysiga Murashixiinta, Jawaabtii Madaxweynaha Iyo Heshiiskii
October 22, 2015 | Published by: Khadar Jaamac Dirir (Jacayl)
Hargeysa (Ogaal) Madaxweynaha Somaliland ayaa shalay kulan la yeeshay dhinac ka mid ah dhinacyadii hore isugu khilaafsanaa qabanqaabada shirka Kulmiye, iyadoo horena madaxtooyadu ula kulantay dhinaca kale.
Siday tibaaxeen xoggo uu wargeyska Ogaal ka soo xigtay illo ku dhawdhaw madaxtooyadda ayaa sheegay, in madaxtooyadu shalay qaabishay garabka isbahaysiga murashixiinta Kulmiye, isla markaana ay shirkaa uga qayb galeen Wasiir Maxamed Biixi, Xil. Kijaandhe, Gudoomiye xigeenadda golaha wakiiladda (Baashe iyo cali Yuusuf) iyo gudoomiye xigeenadda 2aad iyo 3aad ee xisbiga Kulmiye (Xil. Waabeeye iyo Xil. Talyanle). Xoggahaasi waxay tibaaxeen in garabkani uga warameen madaxweynaha wixii dhacay intii uu dibadda ku maqnaa, gaar ahaan fal ciidamo loo adeegsaday oo lagu joojiyay kulan ay ku qabsan lahaayeen huteel Maansoor, isla markaana waxay ka dacwoodeen sidii loola dhaqmay iyagoo ah madaxdii qaranka. Xoguhu waxay intaa raaciyeen oo ay ku dooddeen, in falkaasi ceeb u soo jiiday dawladda, iyaddoo ahayd markii u horaysay ee xukuumaddu gudaheedda isu adeegsatay ciidan.
Siday xoggahaasi iftiimiyeen dhinacani waxay u qadimeen madaxweynaha cabasho la xidhiidha talaabaddaa oo ay tusmeeyeen inuu amarkeedda lahaa madaxweyne xigeenku. Wararku waxay intaa ku dareen, in garabkani ay u sheegeen madaxweynaha in loo baahanyay in shirka Kulmiye noqdo mid xor ah oo tartan xalaal ahi ka dhaco. Sidoo kale waxay u qadimeen waxyaabaha ay saluugsan yihiin ee dhinaca qabanqaabadda shirka. Xoggahani waxay intaa ku ladheen in garabka isbahaysiga murashixiintu uu garnaqsi buuxa la hortegay qoyska madaxtooyadda, isla markaana ay u bandhigeen inay ka tirsadeen eex dhankooda.
Wararka laga soo xigtay illahaasi waxay sheegeen, in madaxweynuhu dhiniciisa uu u muujiyay in aanay fiicnayn in sidaa wax u dhacaan, isla markaana wuxuu u jeediyay in wixii hore halkaa lagu dhaafo oo lagu iloobo, haatanna loo midoobo sidii shirku u dhici lahaa ee loogu tartami lahaa. Waxa kale oo madaxweynuhu labadda dhinacba u sheegay inay ku midoobaan qorshaha shalay ay wadajirka ugu dhawaaqeen. Xoggahaasi waxay intaa ku ladheen in madaxtooyadu u sheegtay xubnahaa, in aanay kala raacsanayn murashixiinta ee ay dhex u yihiin, isla markaana ay taageeri doonnaan murashaxa soo baxa ee la doorto.
Xogahaa ka sokow ma jiraan warar madax banaan oo ka soo baxay shirkaa. kulankan shalay ka hor madaxtooyaddu waxay qaabishay Gudoomiyaha xisbiga Muuse Biixi oo ah murashaxa ay is hayaan murashixiinta isbahaysiga, isla markaana natiijaddii kulamaddaasi waxay horseeday heshiiskii shalay ay wadajirka ugu dhawaaqeen dhinacyadda Kulmiye.